Owen oo saadaaliyay afarta koox ee kaalmaha sare ku dhameysan karta dhamaadka xili ciyaareedkan – Gool FM
Owen oo saadaaliyay afarta koox ee kaalmaha sare ku dhameysan karta dhamaadka xili ciyaareedkan
(Premier League) 31 Dis 2018. Halyayga reer ee England Michael Owen ayaa saadaaliyay afarta kooxood ee kaalmaha sare ku dhameysan doono xili ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Michael Owen ayaa ka careysiiyay jamaahiirta kooxdiisii hore ee Manchester United, oo qaab ciyaareed fiican qaadanaya tan iyo markii si ku meel gaar ah uu shaqada kala wareegay Ole Gunnar Solskjaer dhigiisa shaqada laga ceyriyay ee Jose Mourinho.
Owen ayaa aaminsan in kooxdiisii hore ee Liverpool ay xili ciyaareedkan ku guuleysan doonto horyaalka Premier League, halka Manchester City uu sheegay inay ku dhigeysan doonto booska 2-aad, sidoo kale Chelsea ayuu u saadaaliyay 3-aad, halka Tottenham uu u saadaaliyay booska 4-aad.
Michael Owen ayaa ka saaray kooxaha Manchester United iyo Arsenal 4 sare ee horyaalka Premier League xili ciyaareedkan.
Halyayga reer England ayaa kaga jawaab celiyay boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka su’aal ku aadaneyn afarta kooxood ee ku dhameysan doonta xili ciyaareedkan kaalmaha ugu horeeya wuxuuna yiri:
“Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur ayaa ku dhameysan doona afarta sare”.
“Hardsfield and Cardiff City waxay u laaban doonaan heerka labaad, balse ma hubo kooxda seddexaad”.
Halyeygii Liverpool Peter Thompson oo Geeriyooday